Kabary fanasana Olona hisakafo - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary fanasana Olona hisakafo
Kabary fanasana Olona hisakafo
by Alpha world on 00 h 22 in Culture, Education
Miakina amin’ny zava-misy ny teny ambara.
Tranga mety hiseho:
1) Efa mipetraka manoloana ny latabatra ny olona.
2) Vita ny fiaraha-miala hetaheta tao ivelany ary handroso ao amin’ny efitrano fisakafoana.
3) Tranga hafa miankina amin’ny tompom-panasana
Ohatra iray amin’ny tranga 1:
Tontosa sao aman-tsara ny zavatra rehetra nataontsika ka tsy hisy resaka lava atao intsony. Na izany aza anefa, tsy ho toy ny lanonam-borontsiloza ny antsika teto, ka ny akora lava maneno lohasaha, ny dobok’aponga tsy hita velively nefa nony avy eo dia samy rava, fa ny hanin-karoso vahiny tsy misy.
Ny vatana anefa hono tompoko mila sakafo, ny tsiny tsy mba vatsy, ny kibo tsy mba lamosina, ny kitapo foana tsy mahajoro. Tsy ho hafanan-ko tsofina toa ranovola intsony izy ity fa:
Ny manta am-bilany hono, mila mpahandro;
Ny masaka an-toko mila mpandroso
Ny voaloatra an-dovia mila mpandroso
Ny sakafo voaroso mila mpihinana
Koa mirary anareo hazoto homana tompoko,
Mazotoahomana ary tompokolahy mihinana finaritra tompokovavy.
Tsara ho fantatra eo am-pisakafoana
Matetika dia mipetraka eny amin’ny toerana voatokana hoan’ny Ray aman-dreny ny mpikabary eo am-pisakafoana koa tsara ny hahafantarana ny fomba tokony hatao amin’izany mba ho mendrika ny haja sy voninahitra natolotr any tena. Misy 25 izany raha kely indrindra.
“Voninahitra an-tsobiky, aza atao am-patram-bary; ilo mby an-doha aza araraka an-tany.”
Kabary mialohan'ny fanapahana ny mofo (gateau)
Kabary fisaorana sy famaranan’ny mpamoaka
Kabary fisaorana sy famaranan’ny mpangataka
By Alpha world at 00 h 22